Madaxweynaha Puntland oo Kusoo Laabtay Garoowe Kana Hadlay Safarkiisa[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Madaxweynaha Puntland oo Kusoo Laabtay Garoowe Kana Hadlay Safarkiisa[Sawirro]
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayey safar shaqana ugu maqnaa dalka Ethiopia ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 26-4-2014 dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Dawladda Puntland.
Madaxweynaha iyo wafdiga la socday ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Garoowe si weyn ugu soo dhoweeyey Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng.Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, masuuliyiin ka tirsan golayaasha Dawladda Puntland,saraakiisha sare ee ciidamada Puntland, haween , dhalinyaro iyo dadweyne kale.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa warbaahinta qeyba-heeda kala duwan shir jaraa’id oo uu kaga warbixinayo safarkii shaqo ee uu dalka dibadiisa ugu maqnaa ugu qabtay madaxtooyada Puntland ee Garoowe.
” Waxaan ka soo laabtay shirkii Tana Forum , shirkaasi oo sanadkiiba mar la qabto Puntland ay u tahay sanadkii labaad oo ay ka qeyb-gasho , waxaana isugu yimi shirkaa wadamo badan oo ay ka socdeen madaxda geeska afrika ” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxda dawaldda Ethiopia oo uu madaxweynuhu kalamo kala duwan la qaatay ayuu sheegay in ay uga wada hadleen sidii loo bilaabi lahaa isu socodka ganacsiga dawladdaha Puntland iyo Ethiopia oo meel wanaagsan maraya.
Madaxweyne Gaas ayaa ciidamada Puntland ku bogaadiyey sii wadida dagaalka adag oo ay dawaladdu kulajirto koox diimeedka Ururka Al-shabaab, waxaana uu sidookale tilmaamay in Puntland ay ka adag tahay adkaynta midnimada iyo amnigeeda.
Madaxweyne Gaas ayaa ugu dambeyn sheegay in meel wanaagsan ay marayso in maalgashi caalami ah laga samaysto Puntland islamarkaana ay yimaadaan shirkado ganacsi oo waaweyn.